UMichael Paul Sibisi – The Ulwazi Programme
UMichael Paul Sibisi wazalelwa eMkhumbane, eThekwini ngomhlaka 23 Septhemba 1948. Waya e-Chersterville Secondary School lapho aqeda khona ibanga 9 ngo-1965. Waqhubeka nokufundela ubuthishela e-Adams Teachers ‘Training College. Ithalente lakhe lavulwa ngu-Innocent Masondo owayenguthisha wakhe. Njengoba zazingekho izifundo zobuciko e-Adams College, wasebenzisa iseluleko sikaMasondo wafaka isicelo sokuyofunda eNdaleni Educational Training School ngaphansi kuka-Lorna Peirson ngosizo lwezezimali olunikezwa yiBantu Education Bursary.
Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe wafundisa ezobuciko e-Appelsbosch Training College, e-Oswatini kusuka ngo-1969 kuya ku-1971. Nguye owanqoba i-Graphic Art Award e-Black Expo yango-1973. Ngo-1974 waba nombukiso ohlanganyelwe e-NSA Gallery, eThekwini, noVuminkosi Zulu. Ukusuka ngo-1975 kuya maphakathi no-1977 wafundisa eKwathambo Combined School, ngaseManzimtoti wabe esedlulela eMzuvele High School KwaMashu lapho asafundisa khona (ezobuciko, isiNgisi nokuhola)
Ngo-1984 uSibisi wathola imali yesibonelelo i-Operation Crossroads Africa eyamenza wakwazi ukuvakashela e-USA. Ngo-1987 wachitha izinyanga eziyisithupha e-Brithani eFlying College e-Birmingham efundela ezobuciko namasu wokuqhafaza. USibisi ubambe iqhaza ekusunguleni imihlangano yokucobelelana ngolwazi ngamasiko eNatali.
Nanjengomculi– ohlala ngaphansi kukaRoom 13, uSibisi uyaqhubeka nokugqugquzela futhi aqondise abaculi abaningi abasha abafisa ukungena kulo mhlaba wobuciko. Ngenkathi efundisa ubuciko eMzuvele High School, wazifaka kokuhlangenwe nakho kwansuku zonke kwabafundi bakhe ukuze athole amakhono amaningi afihliwe okwakumele akhuliswe futhi avezwe obala. Phakathi kwabafundi abaningi bezobuciko abazuze emfundisweni enothando kaSibisi kukhona uSipho Mdanda noThemba Siwela. Ngo-2011, uSibisi wayengumculi osezingeni eliphezulu, owayedumile futhi owayeyingxenye yohlelo oluthi ‘ Who Am I… Ngingubani?’ Heritage, olwaphetha ngombukiso owavulwa e-Durban Art Gallery ngoSepthemba. Indima yokufundisa ayidlalile phakathi kwentsha nabanye abaculi abangenalwazi yaqhubekisela phambili ukwazi kwabo kwezobuciko – isifiso sokuveza umhlaba ongaphakathi ongachazwa ngamagama akhulunywayo noma abhaliwe.
Lokhu kukhombisa igalelo likaSibisi ekuthuthukiseni isiko lobuciko hhayi kuphela eThekwini, kodwa ezweni lonke. Umsebenzi kaSibisi umelwe kuma-Campbell Collections ase-University of Natal, amaqoqo e-Durban Art Gallery, e-Tatham Art Igalari nase-Universities of Fort Hare nase-Zululand.
Ngokungafani nabaculi abaningi abaqeqeshiwe ezifundweni, uMichael Paul Sibisi uqhubekile nokukhiqiza nokubonisa ubuciko bakhe, ekhuthaza abaculi abasebasha, abasafufusa manje asebethuthukise amasiko aseNingizimu Afrika.